Ukuhlelela ukudla ngendlela elinganisiwe “A balanced meal plan” -
Engabe awazi ukuthi udle okunjani njengoba usutholile ukuthi unesifo sikashukela? Engabe awunaso isiqiniseko sokuthi ikuphi ukudla okumele ukudle okuhambelana noshukela? Noma kuwumqondo omuhle ukuba nomhlengikazi onolwazi ngokudla okumele ukudle njengoba unesifo sikashukela consult a dietician, nanku ke umgodla oqukethe ulwazi mayelana nokudla okumele ukudle ukuso lesimo general guidelines. Kanti ngolunye ulwazi olugcwele, isitolo esithengisa ukudla Pick n Pay sesakhe uhlu lohlelo olusiza ngokuthi abantu abanalesifo badle kanjani.
Ukudla okuhleliwe kwesifo sika shukela
Qaphela: wonke umuntu wehlukile lokho kusho khona ukuthi akusikhona konke ukudla okuvumelana nemzimba yethu. Isibonelo nje, abanye abantu abanesifo sikashukela bayazidla izithelo ”fruits” kanti abanye bayahluleka ngoba lokhu kunyusa ukugula kwabo. Okubalulekile ukuthi uhlale uvakashela umhlengikazi noma osompilo ukuyobheka ukuthi ushukela usame kanjani, kanye nokuthola ukuthi ikuphi ukudla okuhambelana nomzimba wakho nokungabi nankinga uma usukudlile.
Umthamo iwona obalulekile
Okumele kuhlale kuse mqondweni ukuthi umthamo iwona obalulekile. Noma ngabe uyabala noma awubali umsoco wokudla okudlayo carb counting kuqinisekise ukuthi ukudla okudlayo kunayo yonke inhlobo yomsoco, singabala ezisuka ezitshalweni kanye nasenyameni, ukudla akungabi umthamo omningi kodwa kube ukudla okunempilo okunalezinto ezibalwe kulelikhasi. Awuthi ukubheka kancane la uhlu lokudla okuhlongozwa ukuthi kumele ulidle uma unalesifo okuyisiqalo sempilo engcono. Kanti ke uma uthanda ungazithathela lona loluhlu njengoba likuleli khasi elingenzansi.
Zitholele nalu uhlelo lokudla okumele ukudle
Uma ufuna ukuzitholela leli khasi ukuze ukwazi ukulisebenzise, vele ucafaze la okubhalwe khona ukuthi “download” ngenzansi. Kanti ke yonke imininingwane ngokudla okufakwe lana nokuthi kuphekwa kanjani kukhona kulelikhasi ngezansi. Sicela usazise ngombono wakho mayelana nalo loluhlu lokudla!
Ukuhlelela ukudla okunempilo
Indlela okuphekwa ngayo nokumiswa kwakho
Imniningwano yase Pick n Pay yezempilo
Uthi ubuwazi nje ukuthi isitolo sakwa Pick n Pay siqasha usololwazi wokudla osemthethweni osiza mahhala ngokufundisa aphinde acobelele ngolwazi ngezindlela zokudla okumele kudliwe? Bathinte ke kule mniningwane, 0800 11 22 88 noma ubathumele meyili ngqo ku healthhotline@pnp.co.za khona nizoqala nixoxisane mayenala nokudla okufanele.
[…] Yini Isifo sikaShukela? Ezinjani lezinhlobo zikashukela ezibizwa ngo Type 1 & Type 2? Ukuhlelela ukudla ngendlela elinganisiwe “A balanced meal plan” Ongcweti abahamba phambili ekulweni nesifo sikashukela eNingizimu Afrika Ukudla okunempilo […]